Tụgharị Adreesị email na Social ọgụgụ isi | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa nọ ebe ahụ nwere ike ijikọ email gị na ndepụta ndị ahịa na data mmekọrịta na-agba ọsọ. Ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na-agbakwunye ntọala nzuzo iji belata mgbasa nke ozi a. Flowtown na Ogologo apula inye ozi profaịlụ nke ndi mmadu.
Uzo di na ulo oru ahu yiri Mpịakọta (ndị nwekwara zụta Qwerly). Fliptop gbanwere azụmahịa ya na mbubreyo 2011 ka ọ na-eme ka ọgụgụ isi ọgụgụ isi na-elekọta mmadụ. Fliptop na-enweta data ya site na ọtụtụ ebe ọha na eze dị, wee jikọta ya iji mepụta profaịlụ onye ọrụ. Ozi niile gbakọtara bụ nke ọha ma nwee ike ịchọta ya na ngalaba isi njikwa ọchụchọ na azụmaahịa weebụsaịtị. Fliptop jikọtara na Salesforce Data,
Naanị ihe enyemaka ọzọ m chọtara bụ NetProspex. NetProspex na-enye gị ohere bulite, sachaa, welie, kesaa ma budata data. E nwere ụfọdụ obere ọrụ dịka PeekYou ị nwere ike ime nyocha, ma ọ nweghị onye ọ bụla lekwasịrị anya na mmelite email dị ọcha dịka Fliptop.
Tags: email nkwalitendepụta emailemail mmezi ndepụtafliptopọgụgụ isi mmadụ
Ndewo, enwere ihe CRMe site na CMIP. Ọ bụ a Identity nkewa nke Social Ahịa. Gbanwee Email CRM na profaịlụ data.